डाउनलोड FIFA 10 को लागी Windows
FIFA 10 प्रसिद्ध FIFA फुटबल श्रृंखला हो जुन उत्कृष्टताको बाटोमा कहिल्यै रोकिदैन। FIFA समुदायमा 250 मिलियन भन्दा बढी अनलाइन खेलहरू खेलिएका, FIFA 10 धेरै फ्यान इनपुटलाई दिमागमा राखेर निर्माण गरिएको हो। शृङ्खलाको नयाँ एपिसोडले उत्कृष्ट फुटबल सिम्युलेटर भएको दाबी गर्दछ, विधामा यथार्थवादको लागि नयाँ मापदण्डहरू सेट गर्दै। खेलका सबै मुख्य तत्वहरू परिवर्तन र सुधार गरिएका छन्। खेलाडीहरूको व्यवस्थापन र व्यवहारमा विशेष ध्यान दिइन्छ। FIFA 10 मा फिल्डमा फिन्ट, स्ट्रोक र खेलाडी आन्दोलनहरू यति स्वाभाविक देखिन्छन् कि स्क्रिन वास्तविक रूपमा झ्यालमा परिणत हुन्छ, भर्चुअल स्टेडियममा होइन।
प्राथमिकता स्थानहरूको नयाँ प्रणालीले रक्षामा खेलको अनुहारमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको छ। फुटबलरहरूले मैदानको अवस्थालाई ध्यानपूर्वक विश्लेषण गर्छन् र ती क्षेत्रहरू कब्जा गर्छन् जुन अझै अन्य टोलीका खेलाडीहरूले कभर गरेका छैनन्। आक्रमणमा, तिनीहरू कम सक्षम रूपमा कार्य गर्दैनन्, न केवल विपक्षीको लक्ष्य तिर जान प्रयास गर्दै, तर अफसाइड स्थितिबाट बच्न यस्तो तरिकामा गर्न। आधुनिक ग्राफिक्स संगै, यो सबै एक अमिट छाप बनाउँछ। FIFA 10 ले तपाईंलाई वर्षभरि विश्व कप आयोजना गर्न र व्यक्तिगत रूपमा भाग लिन अनुमति दिनेछ!
रूसी च्याम्पियनशिप! इतिहासमा पहिलो पटक, तपाईंले आफ्नो मनपर्ने क्लबका खेलाडीहरूका लागि खेल्न र घरेलु टोलीहरू मध्ये कुनै एकलाई जित दिलाउन सक्षम हुनुहुनेछ। FIFA 10 मा, बेरेजुत्स्की भाइहरू, Akinfeev, Dani, Semak, Malafeev, Anyukov र अन्य रूसी फुटबल स्टारहरू मैदानमा उत्रिनेछन्। स्पार्टक (मस्को), जेनिट (सेन्ट पिटर्सबर्ग), अम्कार (पर्म), क्रिल्या सोभेटोभ (समारा) र रुबिन (काजान) सहित कुल १६ रूसी क्लबहरूले खेलमा प्रतिनिधित्व गरेका छन्।
उच्च स्तरमा ड्रिब्लिङ! संसारको पहिलो साँचो 360-डिग्री ड्रिब्लिङ प्रणालीको साथ, तपाईंसँग बलमा पूर्ण नियन्त्रण छ। सही सीप र निपुणताको साथ, तपाईं पार्श्व ड्रिब्लिङ प्रयोग गरेर कडा शत्रु प्रतिरक्षाहरू मार्फत चलाउन सक्नुहुन्छ। अब ड्रिबलर र उसको प्रतिद्वन्द्वी बीचको टक्करको परिणाम भविष्यवाणी गर्न अझ गाह्रो छ। घटनाहरू छिटो र प्रायः अप्रत्याशित रूपमा विकास हुन्छन्, जीवनमा जस्तै!
खेलहरूको लागि तयारी गर्दै। गम्भीर विरोधीहरूसँग लडाइँमा संलग्न हुनु अघि, यो राम्रोसँग अभ्यास गर्न लायक छ। नयाँ प्रशिक्षण क्षेत्रमा, तपाईं स्वतन्त्र रूपमा डिफेन्डर र आक्रमणकारीहरूको संख्या सेट गर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न परिस्थितिहरूमा काम गर्न सक्नुहुन्छ।
स्मार्ट फुटबलरहरू। भर्चुअल खेलाडीहरू धेरै विवेकी र व्यावहारिक भएका छन्। तिनीहरूले तिनीहरूलाई पठाइएको बललाई रोक्दैनन्, र एकअर्काको खुट्टामुनि पर्दैनन्, यसले सही पास बनाउन गाह्रो बनाउँछ। तर जब दुश्मन आक्रमणमा जान्छ, तिनीहरूले यसलाई रोक्न एकसाथ काम गर्छन्।
गहना बल स्टप। FIFA 10 ले बललाई कहिले र कहाँ रोक्ने भनेर सहज बनाउँछ, ताकि तपाईं यसलाई छिटो र सजिलोसँग पिनपोइन्ट सटीकसँग गर्न सक्नुहुन्छ।
सटीक स्थानान्तरण। खेलाडीहरूको पासहरू सानो विवरणमा प्रमाणित हुन्छन्। एक सटीक पास पछि, बल प्राप्त गर्ने खेलाडीले एपिसोडको विकासको लागि थप विकल्पहरू र तिनीहरूलाई लागू गर्न पर्याप्त समय प्राप्त गर्दछ।
विभिन्न स्ट्राइकहरू। फुटबल खेलाडीहरूको स्वामित्वमा रहेका प्रविधिहरूको शस्त्रागार उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। FIFA 10 मा, तिनीहरूले धेरै फरक तरिकामा बललाई किक गर्छन्, जसले भर्चुअल खेललाई वास्तविक फुटबलको नजिक ल्याउँछ।
अभेद्य संरक्षण। सुधारिएको ट्याकल मेकानिक्स, क्रसहरू ब्लक गर्ने क्षमता, उच्च-उडान बलहरूको सुरुचिपूर्ण अवरोध - यी सबैले विपक्षीहरूको लागि जीवन गाह्रो बनाउँदछ र तपाईंको डिफेन्डरहरूको व्यवहारलाई अझ यथार्थवादी बनाउँदछ।
व्यावसायिक लक्ष्य रक्षा। FIFA 10 मा गोलकिपरहरू अधिक स्वाभाविक रूपमा मात्र सर्दैनन्, तर उनीहरूले बलको स्वतन्त्र उडानलाई बाधा पुर्‍याउनु सबैभन्दा फाइदाजनक कहाँ हुन्छ भन्ने राम्रोसँग बुझ्दछ। थप रूपमा, गोलकिपरहरूको शस्त्रागारमा नयाँ प्रविधिहरू देखा परेका छन्, जस्तै बललाई गोल लाइनबाट बाहिर निकाल्ने, जसले गोलकिपरहरूको प्रभावकारिता बढाउँछ।
कोच जस्तै महसुस गर्नुहोस्। कोचिङ करियर मोडको अवधारणामा पचास भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गरिएका छन्। एक प्रशिक्षकको रूपमा, तपाइँ एक हुनुहुन्छ जसले तपाइँको टोलीको शक्ति र कमजोरीहरूको आधारमा जीवन परिवर्तन गर्ने निर्णयहरू लिनुहुन्छ।
यथार्थपरक स्थानान्तरण। स्थानान्तरण सम्झौताहरू वित्तीय मुद्दाहरू, प्रतिष्ठा, सम्भावनाहरू, अन्य खेलाडीहरूको रुचि र अन्य क्लबहरूसँग प्रतिस्पर्धा सहित धेरै कारकहरूमा आधारित हुन्छन्।
आफ्नो नियन्त्रण मा रणनीति। टोलीहरूले 26 विभिन्न रणनीतिक योजनाहरू अनुसार फिल्डमा काम गर्छन्, जुन तपाईंले 14 प्यारामिटरहरू सेट गरेर आफ्नो विवेकमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि कुराले तपाईंलाई खेलको अद्वितीय शैली सिर्जना गर्नबाट रोक्दैन!
ज्ञान नै शक्ति हो ! खेल भन्दा पहिले, तपाइँ विपक्षी टोलीमा स्काउट रिपोर्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, यसको रणनीतिको विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ र सबैभन्दा प्रभावकारी काउन्टर रणनीतिहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
सुविधाजनक अनलाइन खेल। छाडिएको जडान र कम फ्रेम दर समस्याहरू समाधान गरिएको छ। थप रूपमा, FIFA 10 को नेटवर्क मोडमा, सञ्चारका लागि सम्भावनाहरू विस्तार गरिएको छ।
नि:शुल्क डाउनलोड FIFA 10 को लागी Windows प्लेटफर्म.
FIFA 10 प्रसिद्ध FIFA फुटबल श्रृंखला हो जुन उत्कृष्टताको बाटोमा कहिल्यै रोकिदैन। FIFA समुदायमा 250...